Umgodi Wobuthongo Engadini Yase-Ireland Co Wicklow - I-Airbnb
Umgodi Wobuthongo Engadini Yase-Ireland Co Wicklow
Blessington, County Wicklow, i-Ireland
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Janice
U-Janice Ungumbungazi ovelele
Ibekwe phansi kwezintaba ze-Wicklow ebheke i-blessington Lakes Sleepy Hollow iyindawo ekhuthazayo yokuhlala e-Co. Wicklow futhi (eyaziwa ngokuthi i-Garden of Ireland).
I-Sleepy Hollow iyingxenye yendlu enkulu. Ihlalisa izivakashi ezi-2. Ihlanganisa ikhishi le-cum sittingroom kanye negumbi lokulala eliphindwe kabili. Ifulethi linokubukwa okumangalisayo kwamachibi avela ekamelweni lokulala nendawo yokuhlala.
I-Sleepy Hollow iyimizuzu engama-45 ukusuka eDublin City Center kanye nemizuzu engama-45 ukusuka esikhumulweni sezindiza saseDublin. Isigamu sehora ukusuka emijahweni yase-Punchestown kanye ne-Glendalough ekhangayo. Izinsiza zasendaweni zifaka intaba, igalofu, iBlessington Greenway, i-watersports, iRussborough House ikhaya elihle elisingatha umkhosi weKaliedoscope kanye nomkhosi womculo weKnockanstockan ukude ngemizuzu emihlanu. Idolobhana laseBlessington liwuhambo lwemizuzu emihlanu lapho uzothola khona izindawo zokudlela nezindawo zobumnandi.
4.98 · 95 okushiwo abanye
I-Lacken iyindawo enhle yokuhlala. Ibekwe ezansi kwezintaba ze-Wicklow phezu kwamachibi abukekayo e-Blessington nokho imizuzu eyi-10 kuphela uma ushayela usuka eBlessington village, 30minutes drive to Tallaght, Naas, Punchestown kanye nemizuzu engama-30 ukuya eGlendalough.
Abanikazi bayatholakala ukuze basize izivakashi esizeni noma ngocingo.
UJanice Ungumbungazi ovelele